Dad shacab ah oo waxyeelo kasoo gaartay duqeyntii Sh/hoose (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dad shacab ah oo waxyeelo kasoo gaartay duqeyntii Sh/hoose (SAWIRO)
Waxaa isa soo taraya khasaaraha ka dhashay duqeyn ay ciidamada Kumaandooska ee Soomaaliya iyo kuwa taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Duqeyntaasi oo dhacday 18-ka bishan ayaa waxay waxyeelo kasoo gaartay dad shacab ah oo ku sugan guri ku yaalla deegaanka Kuunya Barrow ee gobolka Sh/hoose.
Sida ay kusoo waramayaan dadka deegaanka, diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee AFRICOM ayaa dhowr gantaal la dhacay guriga ay deganaayeen dadkaasi shacab ah, waxaana ku dhaawacantay illaa 6 qofood oo 2 qof ay dumar yihiin, halka 4-ta kalena ay caruur tahay.
Dhinaca kale, qoraal dhawaan kasoo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay howlgal ay 18-ka bishaan si wadajir ah u fulliyeen ciidanka Kumaandooska Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ee AFRICOM lagu dilay 2 ka tirsan dagaalyahanada Al-shabaab.
Qoraalka ayay dowladda Soomaaliya ku xaqiijisay in howlgalkaasi uu ka dhacay nawaaxiga deegaanka Kuunya Barrow ee gobolka Sh/hoose, balse aanay lagu sheegin in dad shacab ah waxyeelo kasoo gaartay.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay oo ay ciidanka dowladda iyo kuwa Mareykanka ee AFRICOM duqeymo diyaaradeed ka fulliyaan deegaano ka tirsan gobolada dalka, kuwaasi oo la sheego in lagu dilay xubno ka tirsan Al-shabaab, balse ay sidoo kale waxyeelo kasoo gaarto dad shacab ah oo aan waxba galabsan.